Goobaha Ganacsiga - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Wadarta Pips) - Forex Lens
Qalabaynta Ganacsiga - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Wadarta Pips)
Ku soo dhawow kulan kale oo ganacsi Forex live by RP Forex. Fadhigii maanta ee tooska ahaa, waxaan uga gudubnay heerka ay maanta marayaan sedexda meheradood ee shalay lafa-guray iyo ganacsiga aan toos u galnay kalfadhigii maanta. Weli wax khasaaro ah kuma lihin usbuucaan (iyo usbuucii hore) waana taasi wax dhamaan xubnaheenna ku jira qolka ganacsiga forex ay ku faanaan.
Intii lagu guda jiray kalfadhigii ganacsiga ee shalay waxaan helnay calaamadaha ganacsiga ee AUDJPY, AUDUSD & CADJPY. Laba ka mid ah saddexda meheradood ayaa la galay iyada oo shuruudaha gelitaanka gaarka ah ee iyaga la buuxiyey. Waxaan sameynay falanqeyn toos ah iyo galitaan gaaban 'CADJPY' oo labada lamaane ay keeneen + 60 pips tan iyo markaas. Our AUDJPY muddo dheer ayaa la hawlgeliyey ka dib markii aan helnay nasasho-diidmo-diidmo heerkeenna muhiimka ah. Labada ganacsiba waxay bixiyeen wadar faa'iido ah +100 pips iyo tirinta.
Maanta, waxaan sameynay falanqeyn farsamo oo toos ah iyo baaq baaq ah oo loogu talagalay XAUUSD Gold iyo EURUSD. Intii lagu guda jiray fadhigeena daqiiqadaha ah ee 30, waxaan awoodnay inaan si fudud u aqoonsanno labada nooc ee ganacsiga isla markiiba adoo adeegsanaya istiraatiijiyadeena waxqabadka qiimaha. Fikrad ahaan, waxaan dooneynaa inaan ka baxno meheraddan ka hor War-bixinta Aan Bixin ee Beerta (NFP) ee Berri.
Berrito, Bixinta Mushaharka Aan Beer-Beerka ahayn (NFP) Waxaa la siidaayaa 8:30 AM EST, 2 saacadood ka hor kulankeenna tooska ah. Suuqyadu waxay noqon doonaan kuwo kacsan ka hor iyo ka dib siideynta, marka fadlan taxaddar. Waxaan ka wada hadli doonaa siideynta NFP, sida usbuucan toddobaadkan ganacsigu u socday iyo calaamadaha ganacsiga usbuuca soo socda. Waxaan kugu aragnaa berrito kulankayaga ganacsiga tooska ah ee bilaashka ah oo bilaabanaya 11:00 AM EST ee ku yaal Xarunteena Ganacsiga. Is ilaali oo ku farxi ganacsiga. Haddii aadan wali nagu soo biirin, maskaxda ku hay waxaan kuugu deeqaynaa 2 bilood qiimaha 1 illaa iyo caawa saqda dhexe (12:00 AM EST).
Gal Gal Qolka Ganacsiga si aad u Daawato Kulan buuxa oo Live ah
Fiiri Kaydka Fadhiga Tooska ee Shalay: October 30th, 2019
Haddii aadan iska qorin a Xubinnimada Qolka Ganacsiga ee Forex, waad sameyn kartaa sidaas gujinaya halkan.
Tags: cadjpy, ganacsiga lacagta, eurusd, tallaabo qiimo Forex, calaamadaha Forex, qolka ganacsiga forex, dahab, ganacsiga dahabka, ganacsiga forex live, ganacsiga nool, nfp ganacsiga, pips, faa'iido, meherado ganacsi, xauusd
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-October-31-20191.jpg 720 1280 Forex Lens News https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens News2019-10-31 12:04:152019-11-20 15:29:48Goobaha Ganacsiga - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Wadarta Pips)
Faa'iidooyinka Gaagaaban ee EURUSD & tirinta, Diyaar Garowga Ganacsi ee Gaaban ee USDJPY?
Saliidda Cuntada Markay 21 Sano Ka Yar tahay + Dukaammo Dahab Ah Diyaar U Yihiin?
Faa'iidooyinka Ganacsiga Forex ee Toddobaadkan: Dib-u-qiimeynta + Muuqaalka Suuqa ee Isbuuca soo socda
Dollar ilaa 92.500 + Kuwa waaweyn ayaa bilaabaya inay siibtaan
Ganacsiga EURNZD Ayaa La Galiyay + NZDCAD Ku Dhaw Diyaar
USDCHF iyo US Saliida Diyaar u ah inay Meel Sare Saaraan
Saliidda Mareykanka +150 Pips oo Faa'iido leh, USDCAD Shorts Next!Juun 29, 2021 - 3: 46 wakhti xaadirkan
Kuwa waaweyn Ayaa Sugaya FOMC Presser + NZDUSD oo Gaaban BilaabayaJuun 28, 2021 - 4: 24 wakhti xaadirkan
Dollar si loo Booqdo 92.00 + EURUSD iyo GBPUSD Intraday IntradayJuun 27, 2021 - 3: 40 wakhti xaadirkan
Wajiyada Dollar Cadaadiska Cadaadiska + Dibiyada Crypto ayaa Ka JawaabayJuun 26, 2021 - 4: 54 wakhti xaadirkan
Dibida Doolarka Isku day inaad riixdo Meel sare + Diyaarsanaanta Muddo Dheer ee Saliida MareykankaJuun 22, 2021 - 4: 14 wakhti xaadirkan
Falanqaynta Waxqabadka Qiimaha - AUDUSD, AUDJPY & CADJPY Soo Celinta Macaashka Toddobaadka ah + Muuqaalka Suuqa ee Toddobaadka Soo Socda